Asesiky ny fitiavana
"Ary izao no didy efa azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa."- 1 Jao. 4:21.
Ny fitiavana no fototry ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Na inona na inona fanekem-pinoana, tsy misy olona manana fitiavana madio an'Andriamanitra raha tsy manam-pitiavana tsy ombam-pitiavan-tena ny rahalahiny izy (...) Rehefa levona ao amin'i Kristy ny "izaho", dia miposaka ho azy ny fitiavana. Rehefa miboiboika tsy an-kijanona avy ao anatintsika ny hery manosika hanampy sy hanasoa ny hafa, rehefa mameno ny fo sy miseho amin'ny endritsika ny taramasoandron'ny lanitra, dia tody eo amin'ny fahatanterahan'ny toetra kristianina isika. (...)
Raha tafakambana amin'i Kristy isika; dia tafakambana amin'ny mpiara-belona amintsika amin'ny alalan'ny masom-by volamenan'ny rojon'ny fitiavana. Amin'izay dia hiseho eo amin'ny fiainantsika ny indrafo sy ny fangorahan'i Kristy. Tsy hiandry ny hitondrana ny sahirana sy ny mahantra eo amintsika isika. Tsy ilaintsika ny iangaviana vao hahatsapa ny fahorian'ny hafa. Handeha ho azy amintsika ny hiasa ho an'ny sahirana sy ny mijaly, toa an'i Kristy nandehandeha nanao soa. (...)
Ny voninahitry ny lanitra dia ao amin'ny fanandratana ny lavo, amin'ny fampaherezana ny ory. (...)
Tsy misy fanavakavahana firenena, na firazanana, na foko, eken'Andriamanitra. (...) Fianakaviana iray tamin'ny alalan'ny famoronana ny olombelona rehetra, ary iray koa noho ny fanavotana. Tonga i Kristy handrava ny rindrina fampisarahana rehetra, hampidanadana ny efitra rehetra ao amin'ny Tempoly mba hahazoan'ny fanahy tsirairay manatona an'Andriamanitra malalaka. Lehibe indrindra ny fitiavany, feno indrindra, lalina indrindra, ka tafatsofoka hatraiza hatraiza. Manandratra ireo fanahy mahantra voafitaka hiala amin'ny faritra misy an'i Satana izany. Mametraka azy ireo eo amin'ny toerana hahatakarany ny seza fiandrianan'Andriamanitra izany, dia ilay seza fiandrianana voahodidin'ny avan'ny teny fikasana. (...)
I Kristy dia mitady izay rehetra ta hasondrotra ho mpiara-dia Aminy, mba ho iray Aminy isika tahaka azy iray amin'ny Ray. Avelany hifampikasoka amin'ny fahoriana sy ny antambo isika mba hiantsoana antsika hiala amin'ny fitiavan-tena; mitady hampitombo ao amintsika izay mampiavaka ny toetra amam-panahiny izy, dia fangorahana sy fahalemem-panahy ary fitiavana. (...)
"Raha mizotra amin'ny lalako hianao", hoy ny Tompo, "(...) dia (...) homeko lalana ho amin'ireo mitsangana ireo hianao." - Zak. 3:7 - eo amin'ireo anjely manodidina ny seza fiandrianany. Amin'ny fiarantsika miasa amin'ny anjelin'ny lanitra eo amin'ny asa ataony eto an-tany, dia manomana ny fiarahantsika Aminy any an-danitra isika. -HF, tt. 400-406 (np).